A Brief history of Hacking - Knowledge is Free
ကွန်ပျူတာစနစ်များသို့ ခိုးဝင်နှောင့်ယှက်မှု ဖြစ်စဉ်အကျဉ်း
ထိုအချိန်၌ တယ်လီဖုန်းကွန်ယက်များတွင် ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် AT&T Company ၏ phone signal ထဲသို့ Captain Crunch ဟု မှည့်ခေါ်ထားသည့် John Draper ဆိုသူသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် အပတ်ရေပေါင်း 2600 နှုန်း ထားတစ်ခုပြ၍ ၀င်ရောက်ယူနိုင်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် telephone လိုင်းများသို့ အခမဲ့ ခိုးဝင်ဆက်သွယ် ခဲ့သည်။
မသက်ဆိုင်သည့် computer စနစ်များကို ခိုးဝင်နှောင့်ယှက်တတ်သူ hacker များအနက် ရှေးဦးဆောင်ရွက်ခဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်သူ Kevin Mitnick သည် computer စနစ်အမျိုးမျိုးသို့ စတင်ခိုးဝင်ကြည့်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အခမ်း အနားပွဲများ၏ telephone လိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ပစ်ခြင်း၊ ရန်သူများ၏ သတင်းပို့ချက်များကို ယုတ္တိ တန်တန် လွှဲပြောင်းပြုပြင်ယူခြင်း၊ data များကို ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း ကွန်ယက်များသို့ ခိုးဝင်ခြင်းအပါအ၀င် hacking လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ကြည့်နိုင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက် ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့ ကိုယ်ကျိုးရှာကာ hacking လုပ်ကိုင်ခဲ့သဖြင့် ပို၍နာမည်ကျော်ကြားသွားသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကို 1983 ခုနှစ်တွင် ပြသခဲ့သော War Games အမည်ရှိ ရုပ်ရှင်ကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့၍ ရိုက်ကူးထားကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကွန်ယက်များပေါ်တွင် Captain Zap ဟု နာမည်ရနေသည့် 23 နှစ်အရွယ်ရှိ Ian Murphy သည် White House နှင့် Pentagon ၏ စစ်ဌာနချုပ်များ၏ computer များအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ချက်ချင်း ဆိုသလို မကောင်းသတင်းဖြင့် ကျော်ကြားသွားခဲ့သည်။
NASA network အတွင်းသို့ Germany လူမျိုးများ ဖွဲ့စည်းထားသည့် Chaos Computer Club မှ ခိုးဝင် ကြည့်ရှုခြင်း ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Hacker များ၏ ခရစ္စမတ်သတင်းပို့ချက် တစ်ခုကြောင့် IBM ၏ နိုင်ငံတကာ ကွန်ရက်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ဖြစ်သွားရသည်။
Russian လူမျိုးများထံ hacking information များ ရောင်းချခဲ့ကြောင်း Kevin Andersons အပေါ် စွဲချက် တင်ခဲ့ရသည်။
Hacker ရာဇ၀တ်ကောင်များကြောင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုဘဏ်သည် စတာလင်ပေါင် 32 သန်းခန့် ဆုံးရှုံးသွားသည်။ အဆိုပါ virus ဖြန့်ဝေမှုနှင့်ပတ်သက်နေသော Nicholas Whitely ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့သည်။
15 နှစ်သား hacker လေးတစ်ယောက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဌာနမှ computer များအတွင်းသို့ ခိုးဝင်နှောင့်ယှက်မှုရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ hacker တစ်ဦးသည် ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ယူသည့် credit card ၏ လုပ်ဆောင်နည်းအတိုင်း ငွေများကို hacking လုပ်ကာ ထုတ်ယူခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှစတင်၍ တရားဝင် anti-hacking အစီအစဉ်များ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားငွေကြေးဘဏ်များနှင့် credit card ကွန်ယက်များအတွင်းသို့ ခိုးဝင်မှုဖြင့် အစ္စရေးလူမျိုး 18 နှစ်သား အရွယ်လေးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ရသည်။
နယူးယောက်မြို့တွင် ဒေသဆိုင်ရာ တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီများ၊ အကြီးစားစီးပွားရေး ကုမ္ပဏီများနှင့် တက္ကသိုလ် များရှိ computer စနစ်များသို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက်မှုဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်ငါးဦးအား အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ရသည်။
ကွန်ရက်လောကတွင် Dark Dante ဟူသော နာမည်ဖြင့် သတင်းဆိုးကျော်ကြားလျှက်ရှိသည့် Kevin Poulsen အား လေတပ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်အရေးကြီးသော ညွှန်ကြားချက်များ ခိုးယူမှုဖြင့် တရားရုံးမှ အပြစ် ဒဏ်ချမှတ်ပေးခဲ့သည်။
John Draper, also known as Captain Crunch, discovers that the peny whistle offered in boxes of Cap's Crunch breakfast cereal perfectly generates the 2,600 cycles per second (hertz) signal that AT&T used to control its phone network at the time. He starts to make free calls.
Kevin Mitnick,alegend among hackers, begins his career of hacking intoavariety of computer systems,including entering banking networks and destorying data, altering c4redit reports of his enemies, and disconnecting the phone lines of celebrities. His most famous exploit hacking into the North American Defence Command in Colorado Springs in spired War Games, the 1983 movie.
Ian Murphy,a23-years-old known as Captain Zap on the networks, gains instant notoriety when he hacks into the White House and the Pentagon.
German Chaos Computer Club hacks NASA network.
IBM international net-wok is paralysed by haker's Christmas message.
Kevin Anderson is convicted of selling hacking formation to the Russians.
Union ank of Switzerland 'almost' loses $32 million to hacker criminals. Nicholas Whitely is arrested in connection with virus propagation.
Fifteen-year-old hacker cracks US defence computer.
US hacker obtains credit card by hacking.
Hong Kong introduces anti-hacking legislation.
Israelis arrest 18-year-old for hacking foreign banking and credit card net-works.
In New York, five teenagers are charged with breaking into computer systems at several regional phone companies, large firms, and universities.
Kevin Poulsen, and infamous hacker known as 'Dark Dante' on the networks, is charged with stealing tasking orders relating to an Air Force military exercise. He is accused of theft of US national secrets and faces up to ten years in jail.
Ref: Computer Journal (Mar, 2005)
Posted by kmo at 8:22 PM